Ịmara Siderodromophobia | Save A Train
Home > Zụọnụ Ndụmọdụ > Ịmara Siderodromophobia
(Emelitere ikpeazụ On: 29/03/2020)
Ejegharị ejegharị nwere ike ọgwụgwọ maka ụfọdụ; ebe otu ihe ahụ nwere ike iduga ọtụtụ phobias maka ndị ọzọ. People who like traveling will probably even looking at their ụgbọ okporo ígwè oche ntinye akwụkwọ maka njem ma hụ na ha na-eme njem.
Gịnị bụ Siderodromophobia?
Ọtụtụ n'ime ndị njem anya online maka ha n'ụgbọ okporo ígwè oche ntinye akwụkwọ; mgbe ndị ọzọ na-ahọrọ nnọọ na-aga na eruba na ga nwere ha ụgbọ okporo ígwè oche ntinye akwụkwọ mere ka na mgbe ọ dị mkpa dabere na ebe ha na-aga na-esote. E nwekwara atụ metụtara ụgbọ oloko na ụfọdụ ndị na-ata ahụhụ site. Egwu ụgbọ oloko a maara dị ka Siderodromophobia. Siderodromophobia bụ a sara mbara nke ukwuu okwu na-ekpuchi ihe niile na-atụ egwu ma ọ bụ atụ metụtara ụgbọ oloko. Isi ụdị ndị na nke a phobia tumadi na-ekpuchi bụ egwu na ndị mmadụ nwere nke ịlụ jiri ma ọ bụ ịnọ na-akara. Ndị ọzọ karịa nke a, e nwere ndị ọzọ na-atụ egwu na ina triggered mgbe ndị mmadụ na-na ụgbọ okporo ígwè. A ga-atụ egwu na izizi phobia, na-elekọta mmadụ phobia ma ọ bụ ọbụna claustrophobia.
Siderodromophobia dabeere na ọtụtụ dị iche iche atụ. Ọzọkwa, dabere na otú oké ọnọdụ bụ. E nwere ike ịbụ ihe mgbaàmà ka obi palpitations, ọsụsọ na-agba, shaking or gastrointestinal symptoms. N'ihi na ụfọdụ ndị, ọnọdụ nwere ike malite ọbụna ogologo oge tupu ụgbọ okporo ígwè na njem na-amalite. Nke a tumadi-emekọ ihe anyị maara dị ka anticipatory nchegbu. Anticipatory nchegbu nwere ike ime ka njọ nsogbu karịa n'ezie phobia onwe ya. Ọtụtụ n'ime oge ndị na-akpata n'ihi na oké egwu na-metụtara a na-ezighị ezi na ahụmahụ na onye okosobode, nke a na-ebe metụtara ụgbọ oloko. E nwere mkpa ịghọta ebe a na-adịghị mma ahụmahụ e jikọrọ ya na uche gị ihe ọ ga-ihe na-mere ị. Ọ nwekwara ike ịbụ ihe ga-mere onye ọzọ ma ọ bụ ihe na anyị nwere ike hụrụ anyị gburugburu ma na onye ma ọ bụ na media.
Ná ngwụsị nke ụbọchị, ọ bụghị dị mkpa na-atụ egwu dị adị; ihe dị mkpa bụ otú i die egwu ma na-agbalị tufuo egwu meworo ka a na ndụ gị. Of niile atụ, Siderodromophobia ma ọ bụ a ụgbọ okporo ígwè phobia bụ nnọọ mfe ngwọta na egosiwo magburu onwe ọma udu, mgbe emeso. Iji tufuo nke phobia, nzọụkwụ na mkpa ka a na ọ bụrụ na apụ na-arụ ọrụ na ịlụ Bibie ọ bụla na-ezighị ezi echiche dị ka ụgbọ oloko na-echegbu. Ọzọkwa, onye na phobia ga-mkpa na-arụ ọrụ na-agbanwe agbanwe ya ma ọ bụ ya agwa metụtara ụgbọ oloko. Ná ngwụsị nke ụbọchị ya ihe na-bụ inogide na nwere ike ofu site ekwesị na-elekọta na ọgwụgwọ.
Leave your fear behind and Order ụgbọ oloko tiketi si Save A Train
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na nnọọ inye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fknowing-siderodromophobia%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / ja na / fr ma ọ bụ / de na ndị ọzọ asụsụ.
#siderodromophobia ụgbọ oloko ụgbọ okporo ígwè njem Atụmatụ travelfear